Phakathi kwemigqa | Ibhulogi ye-FXCC
Isiqephu sokukhanyisa amakhandlela Inkambo, efuna isenzo senani
Feb 27, 17 • Ukubuka kwe-6943 • Phakathi kwemigqa • Amazwana Off kwi-A Candlestick Refresher Course, efuna isenzo senani
Kulungile, ngakho abaningi bethu abathengisi be-forex bazi ukuthi izibani zezibani nokuthi yini okufanele zimelele emashadi ethu. Sizogwema isifundo somlando, ngokuhambisa lesi sisho esheshayo nesikhumbuzo somzimba wokukhanyisa izibani kanye nesithunzi isisho ....
I-psychology ehilelekile ku-Forex Trading
Feb 27, 17 • Ukubuka kwe-6554 • Phakathi kwemigqa • Amazwana Off Ku-Psychology ehilelekile ku-Forex Trading
I-3 uNksz yokuhweba yinto evame ukubhekwa ngayo lapho ekhuluma ngokuhweba; ingqondo, indlela kanye nokuphathwa kwemali kuye kwaba yimigomo evunyelwe lapho sichaza iziyalo ezihilelekile ekuhwebeni. Indlela ngokuvamile ichazwa njengeqhinga lokuhweba ...
Feb 23, 17 • Ukubuka kwe-5752 • Phakathi kwemigqa • Amazwana Off ku-Life of a Forex Trader
Apr 30, 14 • Ukubukwa kwe-8854 • Phakathi kwemigqa • 1 Comment
Ngezinye izikhathi kubalulekile ukuthatha isinyathelo emuva ukuze uthathe 'umbono wezindiza' lapho sikhona khona manje ngokuphathelene nezinhloso zomuntu siqu esizibekwe ekuqaleni lapho siqala ukungena kulo mboni. Isizathu sokuthi kungani ...
Ingabe i-demo idayisa indlela efanele ngaphambi kokuthi 'ukuhweba kwangempela' futhi uma kunjalo ngusiphi isikhathi sithutha ukuhweba kwedemo?
Apr 29, 14 • Ukubukwa kwe-8004 • Phakathi kwemigqa • Amazwana Off Ngabe i-demo ihweba indlela efanele ngaphambi 'kokuhweba kwangempela' futhi uma kunjalo ngusiphi isikhathi sithutha ukuhweba kwedemo?
Kunamathuluzi amaningi awusizo kakhulu abathengi bethu abasinikezayo okuvame ukusetshenziselwa ukusetshenziswa, ukusetshenziselwa kabi, noma ukungazinaki futhi i-akhawunti ye-demo ingenye yokunikeza okukhululekile. Kuyinto engaphansi kokusetshenziselwa abathengisi abaningi abakhathazekile kakhulu ukuthuthela ekuhwebeni kwangempela futhi njengoba ...
Ingabe kufanele sizame ukusindisa nokukhawulela umonakalo wokuhweba okubi, noma nje wamukele futhi uqhubekele phambili?
Apr 25, 14 • Ukubukwa kwe-7816 • Phakathi kwemigqa • Amazwana Off Ngabe kufanele sizame ukusindisa nokukhawulela umonakalo wohwebo olubi, noma nje wamukele futhi uqhubeke?
Kungakhathaliseki ukuthi siphelele kangakanani indlela yethu yokuhweba, kungakhathaliseki ukuthi isisekelo sethu sokuhweba esiphezulu singakanani futhi kungakhathaliseki ukuthi siphelelisile kanjani uhlelo lwethu lokuhweba bonke abathengisi (ngezinye izikhathi) bazobanjelwa emakethe 'ahambe kabi' naphezu kwethu ...
Ngifunda kanjani ukukhulisa inzuzo yami nokunciphisa ukulahlekelwa kwami?
Apr 24, 14 • Ukubukwa kwe-9193 • Phakathi kwemigqa • 1 Comment
Kukhona amaqiniso athile ahlale egxilile kule minyaka ngokuphathelene nokuhweba. Abathengi abanokuhlangenwe nakho nabaphumelelayo bayobonisa ukuthi, naphezu kokuba bakwazi ukuthola amathuba abo aphakeme abekwe 'okulungile', ukuze bangene emakethe kule ...
Ngizozama ukuhweba kwe-FX futhi futhi yini okufanele ngiyenze ngokuhlukile manje?
Apr 23, 14 • Ukubukwa kwe-7670 • Phakathi kwemigqa • Amazwana Off ngizozama ukuhweba kwe-FX futhi futhi yini okufanele ngiyenze ngokuhlukile manje?
Kukhona ukuphikisana okuthile ekuhwebeni kwe-FX; uma 'isikhutha sikukhulile' kunzima kakhulu ukubuyela emuva ngokuphelele embonini ebanzi kanye nomsebenzi wokuhweba. Ngisho noma uke wazama ukuhweba kwe-FX futhi ulahlekelwe imali yakho ...
Abadayisi abasha kumele baqale kuphi ukuhlaziya kwezobuchwepheshe ekuhwebeni kwethu
Apr 22, 14 • Ukubukwa kwe-6909 • Phakathi kwemigqa • 1 Comment
Ngemuva kokuthola imboni yokuhweba yokudayisa ukusimama kwethu kwemvelo ukuzama ukuthenga emakethe nazo zonke izinketho zobuchwepheshe ezehlukene ezitholakala endaweni yethu yokuhweba. Nakuba ukuhlaziywa okuyisisekelo kudinga ikhono elihluke ngokuphelele ukuze ...
Apr 18, 14 • Ukubukwa kwe-9086 • Phakathi kwemigqa • 1 Comment
Inhlanhla yizwi eliphikisana kakhulu kanye nezinto eziphikisanayo ngokulinganayo ekuhwebeni. Sekuqedile izinyanga futhi ezimweni eziningi iminyaka yokudala isu lokuhweba lokuwina, kuze kube sekugcineni sizinikele ohlelweni lwethu lokuhweba ubufakazi, kubonakala kunzima kunoma yikuphi ...